Master Bed Room for rent (Short Terms) Near Jurong East MRT (10 min walk) ::: ShweRoom ShweRooms - Find Rooms | Flats | Apartments | Houses for Shwe Myanmars
Master Bed Room for rent (Short Terms) Near Jurong East MRT (10 min walk)
Ad ID: R-10015153
Posted on6Mar 2020 5:37 pm
Viewed 32510 times
80S$/day (For2persons)
Both Male and/or Female
Email not shown by user
Unicode- Welcome all who want to do 14 days stay home at my apartment. No problem. မိဘဆှမြေိုး မြားကိုစလုံးသို့ခတ်ေတအလညျချေါခြိနျတှငျ ထားရနျအလှနျသငျ့တျောပါသညျ extra bed အတှကျ 30$/bed နှငျ့နောကျထပျ ၂ယောကျနနေိုငျလောကျအောငျ အခနျးကယျြပါသညျ။ လအေေးစကျ ၂၄ နာရီ သုံးနိုငျပါသညျ။
အထူးဝနျဆောငျမှု့အနဖွေငျ့ စင်ျကာပူတှငျနစေဉျကာလတဈလြှောကျ သုံးရနျ Data Sim Card (Unlimited) ကို မိသားစုနှငျ့ဆကျသှယျရနျ ဖစျေ့ဘှတျတငျရနျ(FOC)ပေးထားပါမညျ၊ ရနျကုနျမှမိတျဆှမြေားကို တာဝနျယူငှားပေးရမညျ့သူမြားအတှကျကတော့ ကြှနျတျောတို့အခနျး၏ ဒီဇိုငျးကာလာ ဘာညာအနအေထားကို လာရောကျအကဲဖွတျရနျ 24/7 ဖိတျချေါပါသညျ။
Contacts to refer our service ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဝနျဆောငျမှု့မှတျကြောကျကို ကြှနျတျောတို့နှငျ့ဆကျဆံခဲ့ဘူးသူအောကျပါမိတျဆှမြေားထံ ဖုနျးဆကျစုံစမျးနိုငျပါသညျ။ (Out of office hours please).
# မနှငျးရတနာမြိုး 90522372 (Engineer)
#အောငျကြျောစိုး မမလေဲ့ဦး 9819 1210(SGS)
# ကြျောမြိုးသှငျ 8461 5202 (Keppel)
# ကိုမောငျမောငျ 8670 3709 (Tuas)
# ကိုဟနျနလေငျး 9112 2498 (NEC)
# ကိုဒေးဗဈ 9380 4007 (St. Andrew Anglican Charge Volunteer)
# ကိုသိနျးသနျး 8692 5748
# ကိုဝငျးထကျမိုး 9083 2326 (DIALOG)
# မမလေဲ့ဦး 9010 8477 (Clementi)
# မထားထား 9384 5175
# Ko Than Zaw Htay 9667 0884 (Mapletree)
# Ma Cathy Than 8198 3943 (Novacity)
# Captain Kyaw Min 8412 6904 (ST Engineering)
# Ko San Chit Oo 8163 3087 (Bukom)
# Ma Aye Pyone Yee 9236 2144 (Manulife)
# Saw Hu Gaw 8157 7734 (PEC)
# Aunty Win 8403 5000 (Peninsular)
# Ko Gyi Kyaw + Ma Amy 8218 6133 (Volunteer in Topayoh Buddhist Temple)
# Ma Swe Swe Than 9171 7359 (Tiong Bahru)
Welcome, all who want to do 14 days stay home at my apartment. No problem.The best choice for visitors such as calling parents, wife (+ children), friends & family. Can help/guide with warm hospitalization regarding Singapore tips/tricks & must-go places such as discount locations, value shops, etc. Location is walking distance to big shopping malls such as Jem, Westgate, J-cube, IMM(Factory outlets of Branded products), Science Center, Chinese Garden, Ng Teng Fong Hospital, big Jurong East Swimming Complex, etc.
Here is one of the recommendations of our visitor who stayed in our place.
Customer တဈဦးက (At Face Book) အောကျပါအတိုငျး မှတျခကျြပေးပါသညျ။
စင်ျကာပူမှာ မိမိအိမျသဖှယျနရေတဲ့...တိုကျခနျးလေးပါ.... မိသားစုနဲ့အေးဆေးတဈခေါကျသီးသနျ့ထပျလာအုံးမယျ.....ကလေးတှကေိုအလညျလိုကျပို့ရငျး.......လူဦးရေ ၈ယောကျလောကျအေးဆေးနလေို့ရတယျ......အိပျယာခေါငျးအုံးစောငျအကုနျသနျ့ရှယျမှရှယျ........ခုကတော့ကြှနျတျောတဈယောကျတညျးပေါ့တဈအိမျလုံး.....ဈေးကလညျးတအားသကျသာတယျ....စင်ျကာပူမှာဈေးအကွီးဆုံးကဟိုတယျလေ....ခပျနိမျနိမျ့ဟိုတယျတောငျ.....တဈည.....ဒျေါလာရာကြျောတယျ....ခုလိုမခမျးနားဘူး....မသပျရပျဘူး.....မနှေးထှေးဘူးနျော.....ခုအိမျလေးကဈေးကလညျးတနျမှတနျ....ဘယျလောကျတနျလညျးဆို မပေးရသလောကျကိုထငျရလောကျအောငျဘဲ.......အိမျရှငျဇနီးမောငျနှံ့ကလညျး ....သဘောကောငျးမှကောငျး...ရှိတာခြဧညျ့ခံ....အရကျလား...ဘီယာလား....ဝိုငျလား....ဧညျ့သညျတှလောရငျသောကျဖို့ Bar တောငျထားပေးထားတယျ...အလကားနျော.... ကျောဖီရေ အအေးပွောမနပေါနဲ့တော့....ဟိုတယျထကျသာတယျဗြ။ကြေးဇူးပါခငျဗြ အိမျရှငျအဈကိုနဲ့အဈမ....နောကျတဈခေါကျပွနျလညျဆုံတှပေ့ါမယျ။အဲကနျြသေးလို့ နရောလေးကဆိတျငွိမျအေးခမျြးပွီး ကားရထားစီးရလညျလှယျတယျနျော။ကြှနျတျော မတျလလောကျမိသားစုနဲ့လာလညျအုံးမှာ မိသားစုကိုလိုကျပို့မလို့....စင်ျကာပူ နဲ့ အငျဒိုနီးရှားပါ တဈရကျလညျအုံးမှာ....ဒီမှာတညျးမယျ...မိတျဆှတှေထေဲကဘယျသူလိုကျကွမလညျး.....လိုကျမယျဆိုကွိုစရငျးပေးထားနျော......စီးပှားရေးလုပျတာမဟုတျဘူးနျော သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူခငျခငျမငျမငျသှားခငျြလို့အဖျောချေါတာ.....ကိုယျနကေိုယျပေး....ကိုယျစားကိုယျရှငျးဘဲ......
Zawgi-Welcome all who want to do 14 days stay home at my apartment. No problem. မိဘဆွေမျိုး များကိုစလုံးသို့ခေတ္တအလည်ခေါ်ချိန်တွင် ထားရန်အလွန်သင့်တော်ပါသည် extra bed အတွက် 30$/bed နှင့်နောက်ထပ် ၂ယောက်နေနိုင်လောက်အောင် အခန်းကျယ်ပါသည်။ လေအေးစက် ၂၄ နာရီ သုံးနိုင်ပါသည်။
အထူးဝန်ဆောင်မှု့အနေဖြင့် စင်္ကာပူတွင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် သုံးရန် Data Sim Card (Unlimited) ကို မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်ရန် ဖေ့စ်ဘွတ်တင်ရန်(FOC)ပေးထားပါမည်၊ ရန်ကုန်မှမိတ်ဆွေများကို တာဝန်ယူငှားပေးရမည့်သူများအတွက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အခန်း၏ ဒီဇိုင်းကာလာ ဘာညာအနေအထားကို လာရောက်အကဲဖြတ်ရန် 24/7 ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Contacts to refer our service ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မှတ်ကျောက်ကို ကျွန်တော်တို့နှင့်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးသူအောက်ပါမိတ်ဆွေများထံ ဖုန်းဆက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ (Out of office hours please).
* မနှင်းရတနာမျိုး 90522372 (Engineer)
* အောင်ကျော်စိုး မမေလဲ့ဦး 9819 1210(SGS)
* ကျော်မျိုးသွင် 8461 5202 (Keppel)
* ကိုမောင်မောင် 8670 3709 (Tuas)
* ကိုဟန်နေလင်း 9112 2498 (NEC)
* ကိုဒေးဗစ် 9380 4007 (St. Andrew Anglican Charge Volunteer)
* ကိုသိန်းသန်း 8692 5748
* ကိုဝင်းထက်မိုး 9083 2326 (DIALOG)
* မမေလဲ့ဦး 9010 8477 (Clementi)
* မထားထား 9384 5175
* Ko Than Zaw Htay 9667 0884 (Mapletree)
* Ma Cathy Than 8198 3943 (Novacity)
* Captain Kyaw Min 8412 6904 (ST Engineering)
* Ko San Chit Oo 8163 3087 (Bukom)
* Ma Aye Pyone Yee 9236 2144 (Manulife)
* Saw Hu Gaw 8157 7734 (PEC)
* Aunty Win 8403 5000 (Peninsular)
* Ko Gyi Kyaw + Ma Amy 8218 6133 (Volunteer in Topayoh Buddhist Temple)
* Ma Swe Swe Than 9171 7359 (Tiong Bahru)
The best choice for visitors such as calling parents, wife (+ children), friends & family. Can help/guide with warm hospitalization regarding Singapore tips/tricks & must-go places such as discount locations, value shops, etc. Location is walking distance to big shopping malls such as Jem, Westgate, J-cube, IMM(Factory outlets of Branded products), Science Center, Chinese Garden, Ng Teng Fong Hospital, big Jurong East Swimming Complex, etc.
Customer တစ်ဦးက (At FaceBook) အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပေးပါသည်။
စင်္ကာပူမှာ မိမိအိမ်သဖွယ်နေရတဲ့...တိုက်ခန်းလေးပါ.... မိသားစုနဲ့အေးဆေးတစ်ခေါက်သီးသန့်ထပ်လာအုံးမယ်.....ကလေးတွေကိုအလည်လိုက်ပို့ရင်း.......လူဦးရေ ၈ယောက်လောက်အေးဆေးနေလို့ရတယ်......အိပ်ယာခေါင်းအုံးစောင်အကုန်သန့်ရှယ်မှရှယ်........ခုကတော့ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းပေါ့တစ်အိမ်လုံး.....ဈေးကလည်းတအားသက်သာတယ်....စင်္ကာပူမှာဈေးအကြီးဆုံးကဟိုတယ်လေ....ခပ်နိမ်နိမ့်ဟိုတယ်တောင်.....တစ်ည.....ဒေါ်လာရာကျော်တယ်....ခုလိုမခမ်းနားဘူး....မသပ်ရပ်ဘူး.....မနွေးထွေးဘူးနော်.....ခုအိမ်လေးကဈေးကလည်းတန်မှတန်....ဘယ်လောက်တန်လည်းဆို မပေးရသလောက်ကိုထင်ရလောက်အောင်ဘဲ.......အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံ့ကလည်း ....သဘောကောင်းမှကောင်း...ရှိတာချဧည့်ခံ....အရက်လား...ဘီယာလား....ဝိုင်လား....ဧည့်သည်တွေလာရင်သောက်ဖို့ Bar တောင်ထားပေးထားတယ်...အလကားနော်.... ကော်ဖီရေ အအေးပြောမနေပါနဲ့တော့....ဟိုတယ်ထက်သာတယ်ဗျ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျ အိမ်ရှင်အစ်ကိုနဲ့အစ်မ....နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။အဲကျန်သေးလို့ နေရာလေးကဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ကားရထားစီးရလည်လွယ်တယ်နော်။ကျွန်တော် မတ်လလောက်မိသားစုနဲ့လာလည်အုံးမှာ မိသားစုကိုလိုက်ပို့မလို့....စင်္ကာပူ နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားပါ တစ်ရက်လည်အုံးမှာ....ဒီမှာတည်းမယ်...မိတ်ဆွေတွေထဲကဘယ်သူလိုက်ကြမလည်း.....လိုက်မယ်ဆိုကြိုစရင်းပေးထားနော်......စီးပွားရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခင်ခင်မင်မင်သွားချင်လို့အဖော်ခေါ်တာ.....ကိုယ်နေကိုယ်ပေး....ကိုယ်စားကိုယ်ရှင်းဘဲ.......